एनएमबि बैंक र नेपाल क्यान्सर अस्पतालबीच भयो यस्तो सम्झौता, ग्राहक तथा कर्मचारीले पाउनेछन यस्ता सुबिधा « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहक तथा कर्मचारीहरुका लागि नेपाल क्यान्सर अस्पतालसँग बिभिन्न सेवा तथा सुबिधाहरुमा छुट प्रदान गर्ने बिशेष सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौतामा बैंकका प्रमुख विजनेश अफिसर सुदेश उपाध्याय र अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुदिप श्रेष्ठले संयूक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अस्पतालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि, उपकरण तथा अनुभवी डाक्टरहरुबाट बिभिन्न खाले क्यान्सर रोगहरुको उपचार हुने गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार एनएमबि भिषा डेविट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरि अस्पतालमा उपलब्ध क्यान्सर रोगको स्क्रिनिङ प्याकेज, रेडियोलोजी, ल्याबोरोटारी तथा बेड चार्जमा १० प्रतिशत रेडियशन थेरापी र ब्राचिथेरापीमा ७ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई लाभान्वित गराउन तथा केही अत्तिरिक्त सुविधा दिने उद्देश्यले लामो समय देखि यस्ता बिभिन्न खाले सम्झौताहरु गर्ने गरेको बैंकले जनाएको छ । यो सम्झौता एक वर्षका लागि गरिएको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।